Global Voices teny Malagasy · 10 Mey 2013
10 Mey 2013
Tantara tamin'ny 10 Mey 2013
Afrika Mainty10 Mey 2013
Nahita vaovao an-tsary amin'ny endrika vaovao ny mpijery fahitalavitra ao Sénégal, vaovao atolotry ny mpiangaly rap roa malaza ao an-toerana dia i Xuman (39 taona) sy i Keyti (40 taona), iresahana vaovao politika sy sosialy ary iraisampirenena amin'ny teny wolof sy frantsay. Manazavazava amin'i Anna Guèye ireo artista.
Famoronan-Tantara Ao Erbil
Fitaovana10 Mey 2013
Tamin'ny volana lasa, namoaka lahatsoratra teny fampidirana momba ny Storymaker izahay, fampiharana finday eo an-dalam-pandrafetana. Natokana ho an'ireo mpanao gazety manerantany hanatsarany ny fahaizany mitantara (storytelling) amin'ny aterineto ny tetikasa izay tohanan'ny Global Voices, Free Press Unlimited, (Foibe Iraisam-pirenena ho an'ny asa fanaovan-gazety) International Center for Journalism ary ny Guardian Project. Halefa miandalana eny ihany ny...